गाउँ नजिकैको खोल्सामा भेटियो ३ वटा बोरा,खोलेर हेर्दा सबैको गयो सातो। - Nepali in Australia
March 9, 2021 March 9, 2021 EditorLeaveaComment on गाउँ नजिकैको खोल्सामा भेटियो ३ वटा बोरा,खोलेर हेर्दा सबैको गयो सातो।
यो पनिपढ़नु होस:हामीले छोडेपछि प्रचण्ड धुलोपिठो हुन २० महिनै लागेन:काठमाडौ । खुला राजनीतिमा आएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ धुलोपिठो भएको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले प्रचण्ड र डा। बाबुराम भट्टराईले गलत बाटो लिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् । कुनै बेला प्रचण्ड उभिदा मात्र पनि राजनीतिक हलचल हुने अवस्था थियो तर अहिले आफुहरुले उनको साथ छोडेपछि धुलोपिठो भएको बताए ।
उनले न्यायका लागि संघर्ष गर्न डराउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘केही समयअघि सत्यसँग ल ड्दिन शक्तिसँग झुक्दिनँ’ भनेपनि आफ्नो पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएर गलत गरेको बताए ।
‘हुन त केपी जीले सत्यसँग ल ड्दिन शक्तिसँग झुक्दिनँ भन्नुभयो तर हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिवन्ध के थियो त्यो ? त्यो सत्य र न्याय थियो ? कुमार पौडेललाई समातेर क न्चटमा गो ली हा ने र मा र्नु त्यो सत्य हो ?’, विप्लवको प्रश्न छ ।
चितवनमा फेरि पनि ड’रलाग्दो घ’टना घट्यो,कञ्चटमा गो’ली हानेर ह’त्या(भिडियो हेर्नुहोस्)